Hey manidina ???? mahaliana amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny AI maro amin'ny servery ???
fanontaniana Hey manidina ???? mahaliana amin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny AI maro amin'ny servery ???
1 taona 7 volana lasa izay #902 by fltbuff71
1 taona 6 volana lasa izay #909 by fltbuff71
OK, vonona ny hanidina izahay, avia jereo ny tranokalako, midira miaraka amin'ny JoinFS.
Hanao izany isan'andro isan'andro amin'ny fahitako server isan'andro aho.
1 taona 6 volana lasa izay #914 by fltbuff71
EO AMBONY, ny fiaramanidina mandeha manara-penitra miaraka amin'ny AI maro, dia nandao an'i KMCO ... Jereo ny tranokala momba ny antsipiriany
1 taona 6 volana lasa izay #915 by Dariussssss
fltbuff71 dia nanoratra hoe: EO AMIN'NY TIANA, fiaramanidina mandeha mivoatra miaraka amin'ny AI maro, dia nandao an'i KMCO ... Jereo ny tranonkala ho an'ny antsipiriany
Tsara sy tsara daholo izany, fa aiza ny tranonkalanao?
1 taona 6 volana lasa izay #916 by Gh0stRider203
Dariussssss nanoratra hoe:
Navoakany tao amin'ny FSX, P3D ary forum FS2004. zavatra iray ihany ao amin'ny tsirairay avy. ny tranonkala dia fsxflywithmanyai.weebly.com izay ao amin'ny laharana voalohany amin'ny lahatsoratra (s).
Manokana .... #NotImpressed
1 taona 6 volana lasa izay #923 by fltbuff71
Salama, ao amin'ny laharana voalohan'ny sehatra forum ...
Fotoana mamorona pejy: 0.369 segondra